“Raharaha kidnapping”: voasambotra i Abdi, ilay naka an-keriny sy namona an’i Own Aleck | NewsMada
Tsy mijanona fa mbola nitohy ny fanadihadiana momba ilay raharaha fakana an-keriny sy ny famonoana ilay teratany karana antsoina hoe Owne Aleck, tany Toamasina ny volana jona 2014. Fantatra izao fa voasambotry ny zandary tao Fenoarivo Atsinanana, ny alatsinainy teo, i Nomenjanahary Samy na i Abdi, iray amin’ireo atidoha, ankoatra an’i Tida Kely izay efa maty voatifitra taty Antananarivo.
Voasambotry ny zandary avy ao Fenoarivo Atsinanana i Nomenjanahary Samy na i Abdi. Iray amin’ireo atidoha tamin’ny fakana an-keriny ilay teratany karana, i Owne Aleck. «Teny akaikin’ny EPP Sahavola i Abdi no tra-tehaka, ny harivan’ny alatsinainy teo tokony ny ho tamin’ny 7 ora sy sasany», hoy ny loharanom-baovao iray. Ary nohamafisin’ny zandary ao an-toerana fa taorian’ny angom-baovao voarain’izy ireo ny nanaovana ny fikarohana. Antony nahatrarana an’i Abdi. Taorian’izay, nalefa niakatra eto an-dRenivohitra ralehilahy nanaovana fanadihadiana. Nambaran’ny loharanom-baovao hatrany fa efa voasambotr’ireo zandary ao an-toerana koa Ramanantsoa Alain Joachin, antsoina hoe Ralava. Ity farany izay efa voasambotra tamin’ity volana ity ihany. Namoy ny ainy izy taorian’ny tifitra nahazo azy.
Fantatra fa efa niasa nanao mpikirakira fiarakodia (mécanicien) tao amin’ny rain’i Owne Aleck i Abdi. Tao amin’ny tranombarotra i STI ao Mangarivotra ny nanaovany izany.
Nambaran’ny loharanom-baovao iray fa anisan’ireo mpiara-miasa akaiky amin-dry ry Tida Kely sy i Stephanie ary i Levazaha rehefa amin’ny fakana an-keriny ireo Karana, atidohan’ity asa maloto ity, i Abdi. Izy izay loharanom-baovao ary koa manome ny paikadin’ireo fianakavian’ilay nalaina an-keriny ka mampita izany amin’ireo mpaka an-keriny.
Hanokatra pejy vaovao amin’ny fanadihadiana amin’ny “Raharaha Owne Aleck” izao fahatrarana izao.
Tsiahivina fa ny 14 jona ny nisy naka an-keriny tao Ambohijafy Toamasina io teratany karana io. Enina taona aty aoriana vao hita ny taolambalony tao amina tokotany iray ao Mangarivotra, ny 11 marsa lasa teo.